Gbasara Anyị - TIANJIN CHENG YANG INDUSTRIAL CO., LTD
Anyị na-emekwa ihe dị elu ihe okpomọkụ.
Tianjin Chengyang Industrial Co., Ltd. dị na ọdụ ụgbọ mmiri nke Tianjin n'ebe ugwu nke China. Anyị ụlọ ọrụ ekpuchi ebe ndị 32000 sqm, na ihe karịrị 200 ndị ọrụ na-enwe kwa afọ mmepụta uru nke ihe karịrị 15 nde yuan. Companylọ ọrụ ahụ enwewo ngwa ọrụ mmepụta ihe ma ugbu a, enwere ya ihe karịrị 120 nke na-enweghị eriri, 3 dyeing machines, 4 aluminum foil compounding machines, na otu silicone akwa mmepụta akara. Anyị na-emekwa ihe dị elu ihe okpomọkụ. Anyị ụlọ ọrụ abuana ke silicone ntekwasa faiba glaasi ákwà, Pu ntekwasa faiba glaasi ákwà, Teflon iko ákwà, aluminum foil ntekwasa ákwà, fireproof ákwà, ịgbado ọkụ blanket, iko eriri ákwà, nke na-bụ-eji na-ewu, njem, electronic, chemical ụlọ ọrụ, gburugburu ebe obibi-echebe, nchebe mba na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Raara nye nlezianya àgwà akara na-echebara ahịa ọrụ, anyị nwere ahụmahụ ndị ọrụ na-mgbe niile na-atụle gị chọrọ na hụ na zuru ahịa afọ ojuju. Ngwaahịa anyị abụghị ọrịre nke ọma na obodo niile na mpaghara China niile ma rere ya n'akụkụ ụwa niile, dịka American, Australia, Canada, Japan, India, South Korea, Holland, Norway, Singapore na wdg.
Anyị ụlọ ọrụ nwere ike oru ike, elu àgwà, adọ ọkọnọ, ezi mgbe-sales ọrụ, elu aha, ụlọ ọrụ na-"persistent, rigorous, ezi uche, otutu" spirit.Attention zuru ezu management, ala-na-ụwa, ịsụ ụzọ na enterprising . Ofu akpa-klas factory akụrụngwa ọkọnọ, doo doro elu nka ọnọ akpa-klas ngwaahịa maka ọrụ na zuru okè ọrụ. Companylọ ọrụ ahụ dị njikere ịkwado ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ na ndị nwere nghọta. Nzube anyị bụ na-eke uru maka ndị ahịa, na-atụ anya imekọ ihe ọnụ na ị!
Silicon faiba glaasi ákwà igwe
Anyị na-agba mbọ ịnye ndị ahịa ngwa ngwa na nnyefe oge. Anyị nwekwara ọkachamara ahịa otu iji hụ na izu okè na ahịa. Nkwurịta okwu na ezigbo ọrụ; Anyị na-anabata iwu OEM na ODM. Anyị nwere ike inyere ndị ahịa iwu aka nke ha site na ọkpụrụkpụ, ogologo, agba na nkwakọ ngwaahịa nke ngwaahịa ahụ; anyị nwere ọtụtụ afọ nke mbupụ ahụmahụ, nwere ike inyere ndị ahịa aka idozi njem na ọtụtụ ndị ọzọ Na nsogbu. Ma ịhọrọ ngwaahịa dị ugbu a na katalọgụ anyị ma ọ bụ chọọ enyemaka injinia maka ngwa gị, ị nwere ike ịgwa ndị ọrụ ndị ahịa anyị okwu.
Ngwa igwe akwa
Acryli faiba glaasi Cloth, Aluminized faiba glaasi Cloth, Acryli ntekwasa faiba glaasi, Uwe faiba glaasi, Pu ntekwasa faiba glaasi Fabric Cloth, Acryli ntekwasa faiba glaasi Fabric,